Google dia nangataka an'i GitHub hanakana ny toerana fitahirizam-bokatra 135 Widevine | Avy amin'ny Linux
Google dia nangataka an'i GitHub hanakana ny toerana fitahirizam-bokatra 135 Widevine
Navoaka vao haingana ny vaovao fa Google dia nangataka an'i GitHub hanakana ny toerana fitahirizana 135 eo amin'ny lampihazo, izay mifandraika amin'ny fampidirana kaody hamaritana lakile hanafoanana ny atiny voaaro Widevine Ny CDM (Module momba ny famoahana atiny) dia voasakana ambanin'ny US Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
Mahagaga ny maro ity zava-misy ity satria tetika tsy fampiasan-kery i Google taloha. mikasika ny resaka fananana ara-tsaina, saingy tamin'ny taona 2018, ny teny filamatra "Aza ratsy" dia nesorina tao amin'ny fitsipi-pitondrantena.
Ny hidin-trano dia natomboka tamin'ny trano fitahirizana izay misy ny lakilen'ny RSA manokana izay nesorina tao amin'ny CDM an'i Widevine vokatry ny banga amin'ireo rafitra fiarovana napetraka tamin'ity modely ity.
Ny ankamaroan'ny trano fitahirizana dia tsoratry ny plugin Chrome broadvine-l3-decryptor, izay ahafahanao miditra amin'ny atiny voahodina amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana voaaro DRM.
Ity plugin ity dia nosoratana hanehoana ny fomba azo anaovana lalivay ny mekanisma fiarovana an'i Widevine amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo antso Encrypted Media Extensions (EME) API ary ny fitadiavana ireo lakilen'ny fanafenana atiny rehetra izay ampitaina.
Ny repository dia manamarika fa ny kaody dia fampisehoana ny fomba fanafihana ary zaraina ho an'ny fanabeazana ihany (ny plugin tsy mamaha ny votoatiny, ny famaha ihany no mamaritra azy, fa ny lakile azo dia azo ampiasaina hamoahana ny lohateny FFmpeg, mamaritra ny lakile azo tamin'ny fanombohana ao amin'ny "-decryption_key").
Google dia mamorona sy mizara Widevine's Content Decryption Module (CDM), manana fahazoan-dàlana hampiasaina amin'ny mpitety maro, toy ny Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ary Opera. Ny Widevine CDM dia ampiasaina miaraka amin'ny Widevine Licence Server hizara ny atiny DRM sy Internet an-tserasera ary ampiasain'ny mpamatsy atiny ao anatin'izany Disney +, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Hulu ary ny hafa, hisorohana ny piraty. ny atiny arovan'ny zon'ny mpamorona.
Google LLC dia manana ny zon'ny mpamorona ny Widevine CDM ary manome fahazoan-dàlana ho an'ny hafa hampiasa azy io nefa tsy misy fanovana na fizarana indray araky ny fehezan-kevitry ny Fifanarahana fahazoan-dàlana Widevine.
Ny fanitsakitsahana ny Fizarana 1201 an'ny Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dia voalaza ho antony nahatonga ny hidin-trano, ary ny plugin mihitsy dia naseho ho fitaovana noforonina manokana hanitsakitsahana ny fampiasa amin'ny fampiasana atiny manana fahazoan-dàlana. Ary hialana amin'ny fomba fiarovana DRM.
Anisan'ireo fandikan-dalàna, ny fisian'ny fisie ao amin'ny trano fitehirizana manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona an'i Google.
Manokana, ny rakitra licence_protcol.proto sy ny Widevine Modular DRM Security Integration Guide ary ny rakitra Overview Architecture DRM Widevine. Manamarika izany, lisansa_protcol.proto dia rakitra lohateny ho an'ny libprotobuf miaraka amina famaritana ny firafitry ny protokol Widevine, izany hoe Google dia manohitra akaiky ny fisalasalana Oracle fanafihana Android.
Ho an'ireo izay tsy mahalala momba ny teknolojia Widevine, tokony ho fantatr'izy ireo fa izany novolavolain'i Google ary ampiasaina amin'ny Chrome sy ny rafitra samihafa (mazàna Linux) izy io. afaka mampiseho atiny arovan'ny zon'ny mpamorona ao amin'ny Netflix, Disney, Amazon Video, BBC, HBO, Facebook, Hulu, Spotify ary serivisy maro hafa.
Module CDM no omena mitovy anarana hamoahana ny atiny, izay ampiasaina amin'ny Chrome, Edge, Firefox ary Opera, ary koa amin'ny vokatra avy amin'ny Samsung, Intel, Sony ary LG.
Tamin'ny taon-dasa, ny ambaratongam-piarovana malemy indrindra, Widevine L3, dia vaky, namboarina tanteraka tamin'ny rindrambaiko, ary matetika ampiasaina hizara atiny ambanin'ny 1080p.
Hita fa ny fampiharana ny fitrandrahana Whitebox AES-128 dia mora iharan'ny fanafihana Differential Failure Analysis (DFA), mamela ny fidirana amin'ny lakilen'ny encryption.
Finalmente, raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao momba ny fangatahana nataon'i Google tamin'i GitHub, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Google dia nangataka an'i GitHub hanakana ny toerana fitahirizam-bokatra 135 Widevine
Manatevin-daharana an'i Microsoft i Guido van Rossum, mpamorona an'i Python.